www.camaloow.com - News: Warar deg deg ah: Ciidamadda DFS oo la wareegay deegaankii ay ku dagaalameen Shabaab & Roobow..............................
June 25 2018 11:37:42
Warar deg deg ah: Ciidamadda DFS oo la wareegay deegaankii ay ku dagaalameen Shabaab & Roobow..............................
<?php </a> Ciidanka dowladda ayaa dagaal kula wareegay deegaankaas iyadoo hadda ay nawaaxigeeda ay ku suganyihiin xoogaga iska soo horjeeda ee kala taabacsan Al Shabaab iyo Roobow.
In ciidanka dowladdu la wareegeen goobtaas waxaa xaqiijiyay mas’uuliyiin katirsan kuwa dowladda Federaalka Somalia Lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Abaal.
Majirto wax war rasmi ah oo ilaa hadda kasoo baxay saraakiisha ciidanka dowladda Federaalka Somalia, kaasoo khuseeya la wareegista deegaankaas Dowladda ayaa wada-hadal kula jirta Roobow kasoo laga saaray liiska Argagixisada Caalamka iyo waliba lacag madaxiisa la dul dhigay.
Arrintaas ayaa keentay in kooxda Al Shabaab weerar kusoo qaado isagoo kasoo goostay sannadkii 2013 wixii waqtigaas ka dambeeyayna ku sugnaa gobolka Bakool isagoo ay weheliyaan mallayshiyaad taabacsan.
Lama oga sida xaalku noqon doono balse deegaanka Abaal ayaa kacsan, waxaana laga dareemaya xiisad dagaal Dhawaan, waxaa mas’uulkaas la kulmay xubno katirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaasoo wada-hadal kula galay nawaaxiga deegaanka Abaal.
· salaad on August 12 2017 · 0 Comments · 62293 Reads ·
Render time: 0.08 seconds 26,365,549 unique visits